Mampijaly vahoaka ny Faktioram-pFAT ! – MyDago.com aime Madagascar
Mampijaly vahoaka ny Faktioram-pFAT !
Mitokona ny mpivarotra Anosibe
Miitatra toa ny sima misioka ny fitakiana ataon’ny Malagasy manoloana ny fandraisana fanapahan-kevitra tsy voalanjalanja ataon’ny FAT.
Rehefa nandray fanapahan-kevitry ny minisiteran’ny varotra momba ny fampiharana ny faanaraha-maso ny faktiora eny amin’ny tsenam-barotra dia niaraha-nahita ireny fa nitokona ny mpivarotra teny Andravoahangy , ny Pavillon Analakely ary dia nanao ny azy koa ny tetsy Anosibe androany.
Nikatona avokoa ny tsena ary dia nitaky ny fanafoanana izany lalàna tandra-metraka sy tsy voalanjalanja izany izy ireo.
Tonga nijery ifotony izany moa ny mpiasan’ny ministeran’ny varotra ary niezaka nanazava ilay lalàna vaovao, horakoraka tsy nisy nifandrenesana no nataon’ny mpivarotra naheno izany fanazavana izany ary dia nanaiky tsy fidiny ireto « mpiasam-bahoaka avy amin’ny ministera Foza »ireto fa hahemotra indray ny fampiharana ny lalàna
Eo no mahalasa ny saina, f’angaha moa azo dikaina ihany izany lalàna napetraka izany? sa atao tsapatsapa toy izany ny fampiharana ny lalàna velona eto Madagasikara?Ao anaty krizy tanteraka mantsy ny vahoaka amin’izao fotoana izao ka miroborobo izay tsy izy ny asa an-tselika toy ny varotra , be ireo very asa sy tsy mahita ny harapaka kanefa ny FAT kosa dia mbola vao mainka manampy trotraka izany fijaliana izany amin’izao antsojay atao amin’ny famoroporonana faktiora izao.MAMPIJALY VAHOAKA NY FAKTIORAM-pFAT !
Auteur Solo RazafyPublié le 20 avril 2011 20 avril 2011 Catégories Magro, Malagasy, Politique
1 pensée sur “Mampijaly vahoaka ny Faktioram-pFAT !”
tsy misy fika raha tsy miverina dada e
Précédent Article précédent : Des dépenses exorbitantes mais aucune solution à la misère
Suivant Article suivant : Mipenipenina etsy sy eroa mitady fankatoavana i Andry TGV !